Ururka Al-shabaab Oo sheegay In Ay Haayaan Ciidamo Katirsan AMISOM Gaar Ahaan Kuwa Uganda – STAR FM SOMALIA
Ururka Alshabaab ayaa markii ugu horeysay sheegay in ay gacanta ku hayaan ciidamo ka tirsan AMISOM gaar ahaan ciidamada Uganda kuwaas oo ay ku qabsadeen dagaalkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Janaale.
Sida ay faafiyeen warbaahinta taageerta ururka Alshabaab afhayeenka dhinaca howlgalada ciidamada Sh. Cabdul Casiis Abuu Muscab ayaa soo saaray qoraal uu ku sheegayo in ay hayaan askar ka tirsan AMISOM gaar ahaan ciidamada UPDF ee ay ku qabteen dagaalkii Jannaale
Warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay askarta ay caafimaad qabaan, Islamarkaana ayna ku jiraan xabsiyada ururka Alshabaab. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay dib u soo gudbin doonaan magacyada, darajooyinka iyo macluumaad ku saabsan askarta ay hayaan.
Inkastoo ururka Alshabaab uu faafiyay inay hayaan ciidamo balse ma soo bandhigin muuqaalo ama sawirada ciidamada ay ku qabsadeen dagaalkii tobaadkii la soo dhaafay ka dhacay Janaale.
Ururka Alshabaab ayaa maalmihii la soo dhaafay kordhiyay weerarada uu ku hayo ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM waxana uu la wareegaay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan iyo Sh/hoose kuwaasoo hore ay ciidamada dowlada ay hore uga saareen ururka Alshabaab.